I-Komban Bus Skin Download Ye-Android [BUSSID Livery] - I-Luso Gamer
I-Komban Bus Skin Ukulanda Kwe-Android [BUSSID Livery]
Wake wadlala uhlelo lokudlala oludume kakhulu lweBus Simulation olubizwa nge-BUSSID? Uma kunjalo kungenzeka ukuthi usujwayelene nezikhumba nezinye izingxenye. Namuhla lapha sibuyile naleli thuluzi elimangalisayo elivumela abadlali bamageyimu bajove Isikhumba Sebhasi Ese-Komban esidumile.
Uma abadlali bengajwayelene nokudlalwa kwegeyimu, iningi labo abakwazi ukubaluleka Kwezikhumba. Kodwa-ke, lapho umdlalo wethulwa okokuqala, abadlali bavunyelwe ukujabulela amathuba angapheli. Lokho kufaka Izikhumba, Imithelela kanye nezinto ezingathuthukiswa.
Ngemva kwesikhathi esithile, zonke lezo zinsiza ezifinyelelekayo zigcinwa ngaphakathi kwesigaba se-premium. Okusho ukuthi abadlali abakaze bavunyelwe ukujabulela izinto ze-pro. Ngaphandle uma bephumelela ekuthengeni okubhaliselwe betshala imali yangempela.
Iyini i-Komban Bus Skin
I-Komban Bus Skin iwumbhalo wakamuva olungisiwe wangaphandle oklanywe onjiniyela. Inhloso yokuhlela le mvunulo ukuhlinzeka ngomklamo oyingqayizivele. Lokho kuvumela abadlali ukuthi bajabulele kanye nokujabulisa abanye ababukeli.
Ngoba lo mdlalo usebenza ngokushelela nabanye abadlali. Ngisho ngeke kube okungalungile uma sibiza umdlalo ngabadlali abaningi. Ngoba inkundla inikeza le seva yangasese e-inthanethi. Lapho abadlali emhlabeni wonke bengajoyina futhi babambe iqhaza.
Nokho uma sikhuluma ngobungqayizivele nokukhangwa. Khona-ke amakhono okudlala abhekwa njengendima ebalulekile. Ngaphandle kwamakhono okudlala, izinto ze-pro ezifana ne-Skins and Effects nazo zibhekwa njengezibalulekile.
Uma umusha kule nkundla, lapho-ke i-akhawunti yakho yokudlala ingase ingakuvumeli ukufinyelela ezintweni zochwepheshe. Phakathi kwabanye abadlali, ibhasi lakho lizobukeka lingakhangi kangako kubabukeli. Ngakho-ke uma sicabangela izikhumba zamahhala kuya kwezinga eliphezulu lapha silethe leli thuluzi.
Manje ukuhlanganisa ithuluzi kuzovumela abadlali ukuthi bajove futhi bahluke kulokhu kudla okudumile. Okubhekwa njengento ebiza kakhulu futhi ewubukhazikhazi ngokubukeka. Nokho isikhumba esiklanywe ngokukhethekile asifinyeleleki ngaphakathi kwesitolo.
Kusukela ekuqaleni kwe-gameplay ehlukile enye i-livery yengezwa ngaphakathi. Kodwa manje lezo Zikhumba sezijwayelekile phakathi kwabanye abadlali. Kodwa-ke, abathuthukisi bafaka le nketho emangalisayo evumela abadlali ukuthi baklame i-livery ehlukile.
Ake sithi uma noma yimuphi umdlali wegeyimu ephumelelayo ekuhleleni isikhumba sakhe asiphuphile. Ube esevunyelwa ukuthi ajove i-livery ngaphakathi kwegeyimu ngokuqondile. Ngaphezu kwalokho, akwenzeki ukujova ezinye izinto ngaphakathi kwegeyimu.
Noma kunjalo, onjiniyela bafaka le nketho ethile ngaphakathi. Manje i-Komban Bus Livery ibhekwa njengento efinyeleleka kakhulu ku-inthanethi. Yize abadlali abaningi befuna ifayela ukuze balishumeke ngaphakathi kwegeyimu.
Nokho, iningi labadlali bayaphoxeka. Kodwa lapha kuwebhusayithi yethu, inketho yokulanda eqondile iyafinyeleleka. Vele uhlanganise i-Komban Bus Skin Download futhi ujabulele ukujova i-livery ethile mahhala ngaphandle kokubhalisa.
Akukho okubhaliselwe okudingekayo.
Ifayela lohlelo lokusebenza kulula ukulijova.
Ngenisa ifayela ngokuqondile kunketho yokusetha.
Azikho izikhangiso ezivunyelwe.
Kusetshenziswa isibonisi sesithombe esithuthukisiwe.
Isibonisi sigcinwe siyi-3D.
Izithombe-skrini zeThe Skin
Ungalanda Kanjani I-Komban Bus Skin
Laphaya amawebhusayithi amaningi athi anikezela ngamafayela afanayo mahhala. Kodwa empeleni, lawo mawebhusayithi anikela ngamafayela mbumbulu nawonakele. Ngakho-ke yini okufanele abadlali bamageyimu be-android benze esimweni esinjalo lapho bengakwazi ukuthola inkundla eyiqiniso?
Ngakho-ke esimweni esinjalo lapho ungakwazi ukuthola inkundla eyiqiniso sicela uvakashele iwebhusayithi yethu. Ngoba lapha kuwebhusayithi yethu sinikeza kuphela amafayela e-Apk ayiqiniso nawoqobo. Ukuqinisekisa ukuvikeleka komsebenzisi sesivele sishumeke ifayela elilandiwe kuma-smartphone ahlukene.
Okokuqala, landa ifayela lohlelo lokusebenza kuwebhusayithi yethu.
Manje vakashela isitoreji seselula ukuze uhlole ifayela le-zip lokulanda.
Khipha ifayela le-zip bese uhlukanisa ifayela le-.scs.
Vula i-Bus Simulator Indonesia.
Bese uvakashela ideshibhodi yokusetha futhi uthole ongenisa ifayela.
Uma usuthole inketho, manje ngenisa ifayela futhi ujabulele isikhumba esisha sha.
Ifayela lingafakwa ngokuqondile ngaphakathi kwefolda ye-Android> OBB.
Ifayela lohlelo lokusebenza elilandiwe esilethula lapha selivele lifakiwe kuma-smartphone ahlukene. Ngemva kokuhlanganisa ithuluzi phezu Smartphones ezahlukene. Asitholanga lutho oluqondile ngaphakathi futhi lusebenza kuwo wonke ama-smartphones e-android.
Inqwaba yezinye izinhlelo zokusebenza ezihambisana nokulingiswa ziyatholakala lapha kuwebhusayithi yethu. Ukuze ufake futhi ujabulele lezo ezinye izinhlelo zokusebenza zemidlalo sicela ulandele ama-URL. Okukhona Ibhasi Simulator Ultimate Skin Apk futhi Ibhasi Simulator Ultimate Apk.
Uma uthanda ukudlala i-Bus Simulator Indonesia futhi ufuna umthombo oku-inthanethi wokujova izikhumba zamabhasi zamahhala. Bese sincoma labo badlali bamageyimu be-android ukuthi bafake uhlelo lokusebenza lwe-Komban Bus Skin. Lokho kuyafinyeleleka ukulanda kusuka lapha ngokuchofoza okukodwa.
Izigaba Amathuluzi, Apps Amathegi I-Komban Bus Skin, Komban Bus Skin Download Imeyili kwemikhumbi
I-IMOBA 2022 Apk Entsha Ukulanda Kwe-Android [ML Injector]